Cunnooyinka iyo xaywaanada la cuno oo bacrimis ka ah oo la ogaaday in Laga Qaado Kansarka (Digniin)! | kowtharmedia.com
Home WARAR Cunnooyinka iyo xaywaanada la cuno oo bacrimis ka ah oo la ogaaday in Laga Qaado Kansarka (Digniin)!
Cunnooyinka iyo xaywaanada la cuno oo bacrimis ka ah oo la ogaaday in Laga Qaado Kansarka (Digniin)!
Sida la wada ogyahay waxaa dunida aad ugu soo badanayo cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan, waxayna cilmibaarayaashu badanaa sababta la xiriiryaan isbadallada ku dhacay nolosha bini’aadanka iyadoo la cunayo cunno caafimaadka u daran, la neefsanayo hawo caafimaadka sun ku ah, la samaynayo caadooyin iyo dhaqamo u daran caafimaadka bini’aadanka.
Cunnada gacan ku rimiska ah: Cunnooyinkaan waxaa loo yaqaanaa “Gene Modified Foods(GMO)” waa cunno aad ugu badan dunida, waxaana looga dan leeyahay in baahida cunno ee dunida ka jirto lagu daboolo, waxaana aad looga helaa wadamada hormaray, cilmibaarayaashu waxay ka cabsi qabaan isticmaalka cunnadaan oo la joogteeyo inay isbadal ku sameeyaan unugyada jirka bini’aadanka.
Hilibka la soo warshadeeyay kadibne la shiilay: waxaa ka mid ah hilibka loo yaqaano “hot dogs”, cilmibaarayaashu waxay sheegaan hilibka qaabkaan loo soo warshadeeyo markii la shiilo inuu soo daayo maaddo kansarka keento oo loo yaqaano “heterocyclic aromatic amines”, sidaas awgeed hilibka noocaan oo kale waxaa haboon in biyo lagu karkariyo ama dabka lala saaro digsi ama birtaawo.
Sokorta loo yaqaano “High Fractose Corn Syrup”: waa nooc ka mid ah sokorta oo warshad soo martay weliba qaarkeed laga sameeyay geedka qasabka oo gacan ku rimis ah.
Kalluunka la dhaqdo: meelo badan oo dunida ka tirsan kalluunka laga cuno lama soo dabto oo waa la dhaqdaa, waxaa lagu xanaaneeyaa barkado waawayn oo lagu daaweeyay qallajiyeyaal iyo sunta cayayaanka disho ee barkadaha lagu shubo, sidaa darteed cilmibaarayaashu waxay sheegaan in kalluunka ganacsi ahaanta loo dhaqdo in halistiisa ay ka badan tahay faa’idadiisa, dhici kartane inuu keeno cudurka kansarka.
Saliida lagu daray macdanta “hydrogen-ta: waxaa saliidaan loo yaqaanaa “Hydrogenated oil”, waa saliid aad looga isticmaalo dunida hormartay, waxaana lagu soo daraa kiimiko kala duwan si urka iyo dhadhanka saliidaan loo badalo, waxay cilmibaarayaashu arkeen in saliidaan ay badasho xuubka ku daboolan unugyada jirka taasoo tilmaan u ah inay kansar keeni karto.
Baradhada shiilan oo bacaha lagu keeno: waxaa kaloo loo yaqaanaa “chips”, waxay ahayd sanadkii 2002, markii climibaarayaal u dhashay dalka sweden ay sheegeen in baradhadaan lagu kariyay dab kor u dhaafay heer-kul-beegiisa 120C inay ku jirto maadada loo yaqaano “acrylamide” oo la isku waafaqsan yahay inay tahay maado kansarka keento, nasiib xumo aad ayay ugu soo badanaysaa dalka, waalidiintane iyagoo aan ogayn ayay caruurtooda u gadaan.
Haddii aad u fiirsatid liiskaan kore waa cunnooyin aan si dabiici ah usoo bixin oo bini’aadan farsameeyay ama uu wax ka badalay, taas ayaa ka dhigayso mid halis ku ah caafimaadka, waxaa mahad Alle ugu sugnaatay inay yihiin cunnooyin laga fogaan karo khaasatan haddii aad ku nooshahay wadamada aan ku tiirsanayn cunnooyinka la warshadeeyo, badankoodne waa cunnooyin dibadda noo laga keeno sida yaanya shiishiidka, cabitaannada SODA-da iyo cunnooyinka gacan rimiska ah.
Haddii aad su’aalo caafimaad ah qabtid ku soo dir qeybta su’aalaha:http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0
Xigasho by Somalidoc.com
Previous PostDaawo MUUQAAL: Axmed Macalin FIQI iyo Mas’uliyiin kale oo Xildhibaano unoqday Galmudug iyo HiirShabeele!! Next PostMUUQAAL: C.salaan Hereri oo booqday Xabaalaha in ka badan 50 Soomaaliya ah oo lagu dilay Canada iyo Dood laga qabtay Muuqaal!!